७ सय ग्राम चामल र ४५ रुपैयाँमा रमाउंदै डन ‘टक्ला’
पुरन साह / जनकपुरधाम, जेष्ठ ९ । सिरहा करागारमा रहेका सञ्जय साहलाई सरकारले प्रतिदिन ४५ रुपैयाँ र सात सय ग्राम सोना मन्सुली चालम दिन थालेको छ । पांच जनाको ज्यान जाने गरि गराइएको जनकपुर बम विष्फोटको मुख्य योजनाकारको रहेको अभियोगमा साह कारागारमा रहेका छन् । कारागार स्रोतका अनुसार साह बसेको थुनुवा कोठामा १२ देखि २० जनासम्म कैदी बस्ने गरेका छन् । साधारण कैदी बन्दी सरह राखिएका निलम्बित सभासद् साहलाई दैनिक पांचचदेखि बीस जनासम्म आफन्त तथा शुभचिन्तकहरुले भेट्ने आउने गरेको जेल स्रोतले बताएको छ । यसअघि सुरक्षाका हिसावले संवेदनशिल मानिएको उक्त कारागारमा सीसी क्यामरा जडान गरिएको छ ।
एसएसपी खरेललाई जोगाउँदै आईजीपी अर्याल
काठमाडौं । प्रहरीको क्षेत्राधिकार नाघेर लेनदेनको मुद्दा हेर्ने महानगरीय प्रहरी परिसरका प्रमुख एसएसपी रमेश खरेलविरुद्ध परेको उजुरी गृहमन्त्रालयमा नै थन्किएको छ । पूर्व एआईजी रमेशकुमार श्रेष्ठले आफुलाई दुब्र्यवहार गरेको सम्वन्धमा एसएसपी खरेलविरुद्ध गृहमन्त्रालय र आईजीपी सचिवालयमा उजुरी हालेका थिए । तर, गृहमन्त्रालयले नेपाल प्रहरीको संगठन प्रमुख आईजीपी उपेन्द्रकान्त अर्याललाई छानविन गरी कानून बमोजिम कारवाही गर्नु भन्दै पत्र पठाए पनि अर्यालले वेवास्ता गरेपछि एसएसपी खरेल कारवाहीबाट जोगिएका हुन् । एसएसपी खरेलले ०७० साल चैत्र २० गते लेनदेनको विषयमा पूर्व एआईजी श्रेष्ठलाई परिसरमा बोलाई प्रमाण नै नभएको १३ बर्ष पहिला केशवराज जोशीसँग भएको कारोबारको विषयलाई लिएर रकम तिर्न दबाव दिएका थिए ।
पोखरा उप–महानगरका भ्रष्टलाई स्थानिय सचिवको संरक्षण
कास्की । पोखरा उप–महानगरपालिकाका भ्रष्ट कार्यकारी प्रमुख अधिकृत झलकराम अधिकारीलाई स्थानिय विकास मन्त्रालयका स्थानिय सचिव शान्ताबहादुर श्रेष्ठले संरक्षण दिएको आरोप लागेको छ । स्थानिय सचिव श्रेष्ठ र उपमहानगरका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अधिकारी सभागृह ठेक्का प्रकरणमा एकसाथ मुछिएपछि उनीहरुबीचको साँठगाँठ बाहिर आएको हो । सभागृह ठेक्का प्रकरणमा अधिकारीले २५ लाख रुपैयाँ घुस आनन्द बतास ब्रदर्श कम्पनीसँग लिएको तथा १० लाख रुपैयाँ सचिव श्रेष्ठले भागवण्डामा पाएको सार्वजनिक भएको छ ।
दाहालसँग वैद्य नजिकिँदै, भट्टराई टाढिँदै
काठमाडौं । एमाओवादीको विराटनगरमा भएको राष्ट्रिय सम्मेलन बाबुराम भट्टराईले बहिस्कार गर्दै बाहिरिए पछिको सम्भावित राजनीतिक समिकरण र ध्रुवीकरणलाई अहिले धेरै कोणबाट विश्लेषण गर्न थालिएको छ । पछिल्लो समय एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा–माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्यबीचको बढ्दो निकटता र अध्यक्ष दाहालको भट्टराईसँगको बढ्दो तिक्तताले उब्जाउने राजनीतिक धु्रवीकरणले देशको वर्तमान राजनीतिलाई नै अर्को दिशामा मोड्ने आशंका गरिएको छ । यसले संविधान निर्माण र सङ्क्रमणकालीन अवस्थाबाट देशलाई निकास दिने कार्यमा समेत प्रभाव पर्ने बताइएको छ । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा पार्टीको नराम्रो हारका कारणबारे अध्यक्ष दाहाल र भट्टराईबीच कुरा मिलिरहेको थिएन ।
'No change in India's foreign policy with new government'
BELAURI , MAY 18 - Vice President of the Nepali Congress (NC) Ram Chandra Poudel has said that he was confident India's Nepal policy would not be changed after the formation ofanew government under Modi's leadership.Talking to media persons at Mahendranagar, Kanchanpur, organised by the Press Union, Kanchapur on Sunday, Poudel said that India's government would not change its Nepal policy because India has been successfully practicing democratic exercises foralong time.
सरकारी कर्मचारीको साख घट्दो
मुकुन्द पौडेल / नेपाल आयल निगमकै कर्मचारीको मिलेमतोमा बुटवलमा १८ हजार लिटर भन्दा बढी डिजेल चोरी प्रकरणले सरकारी संस्थान र कर्मचारीको साख नराम्रोसँग गिरेको छ । निगमका पश्चिमाञ्चल प्रमुख नागेन्द्र कुर्मी घटनामा दोषी देखिनु, ट्याङ्कर व्यवसायीले दोषीलाई उन्मुक्ति दिन आन्दोलन चर्काउनु एवम् राप्रपा नेता दीपक बोहोराले भ्रष्ट व्यवसायी र कर्मचारीको पक्षमा कारबाही रोक्न प्रहरी प्रशासनलाई दबाब दिनुले सभ्य समाज र कानुनी राज्यलाई खुल्ला चुनौती भएको छ । सरकारी स्वामित्वको नेपाल आयल निगम घाटामा जानुमा भ्रष्टाचार र चुहावटलाई मुख्य कारक मानिंदै आएको थियो ।
Modi on course for resounding victory in India election
NEW DELHI, MAY 16 -Early results in India's general election put opposition leader Narendra Modi on course for an absolute majority on Friday, handing him an unfettered mandate to launch his agenda to revive growth and create jobs.Partial counts showed Modi's Hindu nationalist Bharatiya Janata Party (BJP) and its allies leading in 309 seats out of 543 being contested. The ruling Congress party alliance was ahead in just 72, according to NDTV news.Jubilant BJP supporters banged drums, lit firecrackers and waved flags outside the party's headquarters in New Delhi, as results showed Modi ahead in both the seats he was contesting, in his home state of Gujarat and the holy city of Varanasi.
विवादमा परेका डीआईजीत्रयको बढुवा हुने
काठमाडौं । राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण हुन नसकेको नेपाल प्रहरीको बढुवामा भ्रष्ट प्रहरीहरुको मात्र जयजयकार हुने भएको छ । हैसियत भन्दा बढी कमाएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेपछि छानविनको घेरामा रहेका भ्रष्ट डीआईजीद्धय सुरेन्द्र बहादुर शाह र विज्ञानराज शर्माको एआईजीमा बढुवा हुने भएको हो । डीआईजी शाह एसपी हुँदा उनको हतियार प्रयोग गरी शाहका छोराले आफ्नै साथीको हत्या गर्दा समेत कानून अनुसार कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन नदिएर छोरालाई शाहले बचाएको थिए । कानून सवैको लागि बराबर हुन्छ ।
राजधानीका मलमाथि महानगरपालिकाको छल
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले राजधानीका एक दर्जन मलहरुले घरजग्गा कर तिर्न अटेर गरेपछि मलहरु नै बन्द गर्ने तयारी गरेको छ । महानगरपालिकाले राजधानीमा रहेका एक दर्जन ब्यवसायीक केन्द्र मलहरुलाई पटक–पटक कर तिर्ने ताकेता गर्दै आएको छ । तर, ती मलहरुले भाडा कर तिर्न अटेर गर्दै आएपछि बन्द गर्ने तयारीमा महानगरपालिका पुगेको हो । अटेर गर्ने मलहरुलाई गत शुक्रवाररदेखि महानगरपालिकाले चरणबद्ध कारबाही सुरु थालेको छ । महानगरपालिकाले मलहरुलाई एक साताभित्र कर विवरण र कर बुझाउन गत वैशाख ९ गते अन्तिम पत्राचार गरेको थियो । तर, पत्राचार गरेको समय बैसाख १८ गते नै सकिए पनि कर नतिरेको महानगरपालिकाले बताएको छ ।
टाईम्स स्क्वायर मलको विवाद सर्वोच्चमा
काठमाडौं । राजधानीस्थित दरबारमार्गमा रहेको ब्यवसायीक मल ‘टाईम्स स्क्वायर’को विवाद अन्तत: सर्वोच्चसम्म पुगेको छ । आनन्द भैरव ईन्भेष्टमेन्ट प्रालिका सञ्चालक राजाराम बानियाँ र उक्त भवनका मालिकबीच विवाद बढदै जाँदा दुई पक्षबीच भएको करार विवाद सर्वोच्चसम्म पुगेको हो । करार अवधि नसकिँदै टाईम्स स्क्वायरबाट जर्वजस्ती हटाएको भन्दै बानियाँ न्यायका लागि सर्वोच्चमा पुगेका हुन् । बानियाँका अनुसार दरबार स्क्वायर प्रालिका सञ्चालक नोखजंग थापाले करार एकतर्फी भंग गर्दै मल कब्जा गरेका हुन् । आनन्द भैरव कम्पनीले २०६९ पुष महिनादेखि भाँडा बन्यौता उठाउन नदिएका कारण करोडौं घाटा परेको बताउँदै आएको छ ।
मातहतले माखों नमारेपछि एसएसपी खरेल रुष्ट
काठमाडौं । घरमा सुतेका फ्याउरे गुण्डालाई पक्राउ गरेर सस्तो लोकप्रियता हासिल गरेका महानगरीय प्रहरी परिसरका एसएसपी रमेश खरेल जागेका लुटेरालाई नियन्त्रण गर्न भने असफल भएका छन् । दुई सातादेखि राजधानीमा निरन्तररुपमा सिक्री लुट्ने क्रम बढिरहे पनि अहिलेसम्म एसएसपी खरेल र उनका मातहत लुटपाट नियन्त्रण गर्न सफल भएका छैनन् । जनताको जीउधनको सुरक्षाका लागि खटिने प्रहरी नै लुटिन थालेपछि त राजधानीको सुरक्षा ब्यवस्था कति कमजोर रहेछ भन्ने कुराको पुष्टि भएको छ । गत आइतबार महानगरीय प्रहरी आयुक्तको कार्यालयमा कार्यरत महिला हवल्दार सिता उप्रेती नै लुटिएकी थिइन् ।
प्रविधिको नाम भजाएर एनसेलद्धारा मुद्रा अपचलन
काठमाडौं । मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी स्पाइस नेपाल प्राली अर्थात एनसेल नेपालले प्रावधिक सहयोगको नाममा बार्षिक करोडौं डलर विदेश पठाएर मुद्राको अपचलन गर्ने गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति बिना नै प्रावधिक सहयोगको नाममा विदेश पठाइने करोडौं रकम प्रविधि उपलब्ध गराउने कम्पनीलाई पठाउने गरेको हो । स्रोतका अनुसार, गत आर्थिक बर्ष २०१०/०११ र २०११/०१२ मात्र एनसेलले प्रावधिक सहयोगको नाममा एक अर्ब ७ करोड रुपैयाँ नेपाली मुद्धा बराबर डलर विदेश पठाएको थियो । त्यैसगरी, एनसेलले आर्थिक बर्ष २०१२ / ०१३ मात्र झण्डै एक अर्व नेपाली मुद्रा बराबर डलर विदेशमा पठाएको एनसेलको बार्षिक विवरण वासलातबाट खुल्छ ।
लौं है लुटिएला, होसियार !
मुलुकमा सुन तस्करीले जरा गाँडेको बेला राजधानीमा भने दिउँसै सुनका गरगहना लुटपाटको घटनाले तिब्रता पाएको छ । राजधानीमा लुटपाटको घटना बृद्धि भएको छ । तर लुटपाटको घटना नियन्त्रण गर्न नसकेकै कारण राजधानीमा गुण्डागर्दी नियन्त्रण गर्न सफल भएर चर्चा कमाएका महानगरीय प्रहरी परिसरका प्रमुख एसएसपी रमेश खरेलले महानगरीय प्रहरी आयुक्तको कार्यालयका डीआईजी विश्वराज शाहीको हप्की खाएका छन् ।
काठमाडौं । सुनका गरगहनाले सजिएर तपाई बिहेभोज, पाटीमा जान तयारी गर्दै हुनुहुन्छ ? होसियार ! तपाईले घाँटीमा लगाएका गरगहना लुटिन सक्छ । एक साता अघिदेखि राजधानीमा दैनिक चोरी र लुटपाटको घटना बढिरहेको छ । तर, जनताको जीउधनको शान्ति सुरक्षा दिन खटिएका प्रहरी नै आफै लुटिन थालेपछि तपाई, हाम्रो कस्तो सुरक्षाको आश गर्ने ? गम्भिर प्रश्न खडा भएको छ । बिशेषगरी, पाटीमा रमाएर फर्किने क्रममा वा जाने क्रममा लुटेरा समुहले महिलालाई लुट्ने गरेको घटना सार्वजनिक हुन थालेको छ । प्रहरीको रेकर्डमा एक सातामा तिन दर्जन भन्दा बढी महिला लुटिएका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय सुन तस्करीको ट्रान्जिट बन्दै विमानस्थल
काठमाडौं । नेपालको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (त्रिअवि) विभिन्न मुलुकमा तस्करी गर्ने अखडाका रुपमा परिचित हुन थालेको छ । त्रिभुवन विमानस्थल प्रहरी र भन्सार कार्यालयको सयुक्त प्रयासमा दिनहुँजसो सुन बरामद हुन थालेपछि त्रिअविमा अन्तर्राष्ट्रिय सुन तस्करहरु जुर्मुराउन थालेको पुष्टि भएको हो । शनिबार राति १२ केजी तीन सय ५७ ग्राम सुनसहित पाँच भारतीयलाई विमानस्थल प्रहरी र भन्सार कार्यालयले पक्राउ गरेपछि त यो कुराको झन पुष्टि भएको छ । ती पाँच भारतीय नागरिकहरु कतार र फ्लाई दुवईको विमानबाट नेपाल आएका थिए ।
ग्लो साईन बोर्ड हटाउनुको मुख्य कारण घुस नदिनु
क्षेत्रधिकार नाग्दै सडक डिभिजन कार्यालय
काठमाडौं । सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौंले आफ्नो क्षेत्रधिकार भन्दा बाहिर गएर दरबारमार्ग क्षेत्रको सोलार बत्तिको पोलमा जडित ग्लो साईन बोर्ड हटाएको छ । दरबारमार्ग विकास बोर्डले दरबारमार्ग क्षेत्रमा राखेको सोलार बत्तिको पोलमा जडित ग्लो साईन बोर्ड हटाउनुको मुख्य कारण घुस दिन नसक्नु रहेको खुलसा भएको छ । डिभिजन कार्यालयका प्रमुख गोपालबहादुर खड्काले आफ्नो घरमा सोलार हाल्न गरेको आग्रहलाई बिकास बोडले बेवास्ता गरेपछि उनी आफै उक्त बोर्ड हटाउन सक्रिय भएका थिए ।